Indlu yelali ekufutshane nomjelo kwindawo entle yasemaphandleni
Le ndlu yamatye eyi-125 m2 ibuyiselwe ngoncasa ibonelela ngendawo yokuhlala etofotofo enesitayile esinomtsalane saseFransi. Ibekwe kwilali enomtsalane nethuleyo eVallee de l'ouche kufutshane neCanal de Bourgogne. Indawo yasemaphandleni engqongwe lihlathi kodwa ikufutshane nesixeko saseDijon kunye nezidiliya zaseBeaune. Indawo entle yokuhlola iburgundy
Indawo yokulala inamanqanaba amathathu. Kumgangatho ophantsi indawo yokuhlala / yokutyela enekhitshi elidityanisiweyo, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese. Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokuhlala elitofotofo, elinokufikelela kwi-terrace egqunyiweyo, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela. Izinyuko ezivela kwigumbi lokuhlala zikhokelela kwigumbi lesibini lokulala elineebhedi ezimbini kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga
Indlu ikumgama nje wemizuzu embalwa ukusuka elunxwemeni lomlambo iOuche kunye neBurgundy Canal, apho indlela yetowpa idlula emaphandleni. Ifanelekile kuhambo oluthambileyo okanye ibhayisekile ukuya kwibha yendawo kunye nebistro 3 kms kude kwizibuko ePont d'Ouche. Iikhilomitha ezi-3 kwicala elichaseneyo, yi-Abbaye de la Bussiere, indawo yokutyela entle kunye nehotele emi kwindawo yayo yokupaka.
Kwilali kukho ikhefi/ivenkile ngokubanzi. Kukho indawo yokubhaka yobugcisa kwilali elandelayo, umgama omfutshane wokuqhuba okanye ujikeleze umjikelo, kwii-baguettes zasekuseni kunye nee-croissants, nazo zihambisa rhoqo kusasa. Ivenkile enkulu ekufutshane yimizuzu eli-10 kude kwidolophu yentengiso yaseBligny-sur-Ouche.
IVeuvey-sur-Ouche ikwindawo entle yokuhlola iCote d’Or. I-Châteauneuf en Auxois ikwi-12 Kms kude, apho unokundwendwela i-Chateau de Châteauneuf edumileyo, inqaba yeenduli yenkulungwane ye-15 emi kwilali enomtsalane enokhetho oluhle lweendawo zokutyela. ILac de Panthier, apho uya kufumana iklabhu yokuhamba ngeenqanawa, ibha kunye nendawo yokutyela, kunye nolwandle olugadiweyo luyi-15 ams kude. Ungarenta iintlobo ngeentlobo zezixhobo zemidlalo zamanzi ezifana neeCatamarans, sukuma iibhodi zokubheqa kunye neekayaks.
Ukuba uyakonwabela ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile kukho iimayile zeengoma ecaleni kweBurgundy Canal okanye kumahlathi entlambo yeOuche.
Kumgama oziikhilomitha ezingama-30 ukuya kwidolophu enomtsalane ebiyelwe ngodonga yaseBeaune, embindini wengingqi yokwenza iwayini yaseBurgundy, apho uya kufumana eyona mizekelo ibalaseleyo yoyilo lwaseFransi lwamaxesha aphakathi kunye neendawo zokutyela ezininzi, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezintle onokuthi uzijonge. Idolophu eyimbali yaseDijon ikwakumgama oziikhilomitha ezingama-30 kuphela.
Okokugqibela, masingalibali izidiliya ezithandekayo zaseBurgundy, ukuhambahamba kuzo kwaye ukonwabela ukungcamla iwayini ngamava ongasokuze uwalibale. Thatha uhambo nge-Route des Grand Cru ukusuka eDijon ukuya eSantenay ngeNuits-Saint-Georges kunye neBeaune kwaye udlule kwezinye zezona zidiliya zidumileyo emhlabeni.
Sihlala kufutshane kwaye siya kufumaneka ukunceda kuwe usidinga